Egwuregwu Ngwá Ọrụ Igwefụfụ Eletriki China Manufacturer
Nkọwa:Ihe dị na tebụl dị ọkụ maka Office,Office Desk Heater,Igwe ọkụ ọkụ eletrik maka Ụlọ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Egwuregwu Ngwá Ọrụ Igwefụfụ Eletriki
Ihe Nlereanya.: XHC-F011-2
Anyị nwere ike kwa ụbọchị nke na anyị mkpịsị aka freezed ikwesi na oyi, na-eme na ala-arụ ọrụ arụmọrụ. Anyị Electric Desktop Ọkụ Heating ute nwere ike nyere gị ihe ngwọta maka nsogbu a.
Ihe ntanetị ọkụ eletrik anyị, nke mejupụtara ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ nke kpụ ọkụ n'ọnụ, na-enye gị okpomọkụ dị jụụ mgbe ọ bụla ị na-arụ ọrụ. Igwe kpo oku nke kpochapu ihe omimi, nke a maara dika ihe ndi na- ekpo oku oku, bu ihe ndi ozo kpochapu n'ime ulo oru oku. Ọ na-emetụta ọhụụ dị elu dị ka anyanwụ na-eme, na-eme ka ahụ dị gị mma. Ọ na-adịgide adịgide ma na-eji ike karịa ike karịa usoro ikpo ọkụ omenala. Mmetụta infrared nwere ike ịkwalite mgbasa ọbara, mee ka ọrụ ahụ dịkwuo ike , m mprove usoro ihe mgbochi ma nwee ọrụ nke mgbochi ọkpụkpụ detumescence nke dị mma na ahụ ike . E mekwara ihe mgbochi kpo oku anyị iji soro , RoHS, Ul, ETL, ụkpụrụ. Ogo na-edozi n'ezie.
Far infrared kpo oku film na ọtụtụ-eji niile ndụ akụkụ, ndị dị ka protable n'aka ọkụ na oche nke electric kpo oku na mpe mpe akwa nwere ike inye anyị obi ụtọ na oyi na-atụ ihu igwe.
Nguzogide nke mbụ 676-827Ω, nguzobe dị elu 744Ω
Ike 65W ± 10%
1.Size: T0.18 * 340 * 580mm , nke zuru oke
Ihe Mgbochi PET na-agbanwe agbanwe maka oche oche Kpọtụrụ ugbu a
Ngwakọta Ngwá Ọrụ Na-echekwa Ịgba Ọsọ Maka Ụlọ Nche Kpọtụrụ ugbu a
Nkịtị na-ekpo ọkụ na teepu Desk Kpọtụrụ ugbu a
Ihe dị na tebụl dị ọkụ maka Office Office Desk Heater Igwe ọkụ ọkụ eletrik maka Ụlọ Ihe ndị dị ọkụ maka oche oche Ihe na-ekpo ọkụ maka Tile Ihe ndị na-ekpo ọkụ sauna Mittens dị ọkụ maka Winter Ọkpụkpụ aka dị ọkụ maka Scooter